महिला हिंसाको मूल कारण यौन सम्बन्ध नै हो - Bidur Khabar
विदुर खबर २०७६ साउन ५ गते १८:२९
डा.रेणु अधिकारी ,चिकित्सक, मानवअधिकार रक्षक
नेपालमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा आजका मितिमा सर्वाधिक सक्रिय महिलाको सूची बनाउँदा डा. रेणु अधिकारीको नाम कति नम्बरमा आउला ? ठ्याक्कै नम्बर भन्न नसकिए पनि एकै हातका औंलामा उहाँ समेटिनुहुन्छ भन्न अलमलिनुपर्दैन । स्त्री रोग विशेषज्ञ अधिकारीलाई रेणु राजभण्डारीका नामले चिन्नेहरु पनि धेरै छन् । तर, अहिले उहाँ राजभण्डारी हुनुहुन्न । त्यसो त, यो अन्तर्वार्ता व्यक्तित्वमा केन्द्रित नभएर विषयमा केन्द्रित छ । विषय हो– यौनिकता वा यौनअधिकार, जसमा खुलेर सम्बाद गर्न नेपाली समाज आजपनि चाहँदैन ।